तालिबानले भन्यो कठोर सजायहरू फेरि शुरू, के हुन्छ अब ? — Imandarmedia.com
तालिबानले भन्यो कठोर सजायहरू फेरि शुरू, के हुन्छ अब ?
एजेन्सी। तालिबानको संस्थापकमध्येका एक नेताले यसअघिको तालिबानको शासनकालकै नियम पुनः फर्किन सक्ने बताएका छन् ।तालिबानको प्रमुख कानुन कार्यान्वयनकर्तासमेत रहेका मुल्लाह नूरुद्दिन टुराबीले अफगानिस्तानमा फाँसी तथा अंगभङ्गजस्ता कानुन कायम रहन सक्ने बताएका हुन् ।
यद्यपि सार्वजनिकस्थानमा भने यस्तो सजाय नदिइनसक्ने उनको भनाइ छ।एसोसिएट्स प्रेस एपीसँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले अफगानिस्तानको नयाँ शासनमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि चेतावनी दिएका छन्।
टुराबी यसअघिको तालिबानको शासनकालमा कानुनमन्त्री थिए । उनी अहिले उमेरले ६० को दशकमा छन् । उनले यसअघिको पालाको जस्तै सजाय पुनः दोहोरिने बताए ।‘हात काटिदिनु सुरक्षाको हिसाबले निकै आवश्यक छ ।
यस किसिमको सजाय सार्वजनिक स्थलमा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा अध्ययन भइरहेको छ र नयाँ नीति बनाइनेछ ।’टुराबीले यसपटकको तालिबानको शासनमा केही परिवर्तन भने हुने बताए ।
यद्यपि विगतमा सार्वजनिक स्थलहरूमा दिने गरिएका मृत्युदण्डको आलोचना भएको कुरा तुराबीले खारेज गरे। उनले भने, “हाम्रो कानून कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे अरूले भन्नु पर्दैन।”
सन् १९९० को दशकमा काबुलका खेलकुद रङ्गशालाहरूमा अथवा इदगाहमा मृत्युदण्डका सजाय दिने गरिन्थ्यो। त्यस बेला तुराबी न्यायमन्त्रीका साथै सदाचार विस्तार तथा दुराचार नियन्त्रण मामिला प्रमुख थिए।